INITIATIVE POUR L’EMMERGENCE DE MADAGASCAR: VONONA HITONDRA NY ANJARA BIRIKINY NY KOREANA TATSIMO
On jan 23, 2019 14 678
Sary sy soratra : andry Rakotonirainy
Ny herinandro lasa teo, nanatanteraka valan-dresaka tamin’ny mpanao gazety ny Masoivoho koreana tatsimo LIM SANG WOO. Navoitra tamin’izany fa mitohy hatrany ny fiara-miasa ny koreana sy Madagasikara , amin’izao nahazaoan’i Madagasikara filoha vaovao izao.
Ny lafin’ny fanabeazana, efa niara-niasa tamin’ny Unicef, ny tontolo iainana , ny fitsaboana no anisan’ny fiara-miasa eo amin’ny firenena roa tonta.
Ny tetikasa IEM sy ireo vina maro noazaivan’ny filoha Malagasy Andry Nirina RAJOELINA nandritra fampielezan-kevitra dia mifanaraka tsara amin’ny tanjona tratrarin’ny Repoblikan’ny Korea. Ho tohizana araka izany ny hetsika lehibe efa natao tamin’ny taona lasa, toy ny Agro-busness .
Ny fitsaboana: mpitsabo miisa 7 avy any Korea no tonga eto Madagasikara ankehitriny, tarihin’ny dokotera Lee Jae Hoon avy aminny Miral Welfare Foundation.
Hampianatra ireo mpianatra mpitsabo eto izy ireo. Ny Dokotera Lee Jae Hoon dia efa 14 taona izay no teto Madagasikara , manana ny tanjona manokana izy dia ny fizarana ny fahaizany amin’ny mpitsabo hafa. Firariany dia ny hanana ny fitsaboana ampy ho an’ny mponina any ambanivohitra , izay voalazany fa tena mahonena.
Mandritra ny telo andro 23 ka hatraminny 25 Janoary dia misy seminera izay karaikarain’ny masoivoho koreana eto amintsika miaraka amin’ny manampahaizana Malagasy sy Koreana mpitsabo momba ny homamiadana .
Fifampizarana traikefa no atao mandritra ity seminera ity eo amin’ny fomba fitiliana ny sela atao hoe : CYTOPATHOLOGY, hoy ny Profesora Randrianjafisamindrakotroka Nantenaina Soa .
CYTOPATHOLOGY dia fomba iray afahana mitily ny homiadana., .
Ity seminera ity dia tetikasa avy aminny Dokotera Lee Jae Hoon, hoy ny masoivoho Koreana LIM SANG WOO.
Tetikasa, hitetezana ny any ambanivohitra hitsaboana ny mponina amin’ny alalan’ny « Clinique mobile », efa nahatratra 100 ny fitsidihana nataon’ny dokotera Lee Jae Hoon tamin’ny tanana maro .
INCIDENT À ANDOHALO: ANDRY RAJOELINA PRÉSENTE SES CONDOLÉANCES
FRANTSA: HANAMAFY NY FIARAHAMIASA AMIN’I MADAGASIKARA